Mabasa 25 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
25 Naizvozvo kwapera mazuva matatu, Festo akakwira kuJerusarema achibva kuKesariya+ shure kwokunge apinda+ muhurumende yoruwa irworwo; 2 uye vapristi vakuru nevarume vakuru vevaJudha vakamhan’arira+ Pauro kwaari. Naizvozvo vakatanga kumuteterera, 3 vachikumbira kuti vaitirwe zvakanaka pamusoro pomurume wacho kuti iye atumire shoko rokuti aunzwe kuJerusarema, zvavakanga vakamuvandira+ kuti vamuuraye vari mumugwagwa. 4 Zvisinei, Festo akapindura kuti Pauro aifanira kuchengetwa muKesariya uye kuti munguva pfupi iye akanga ava kuda kuenda ikoko. 5 “Nokudaro vaya vane simba pakati penyu,” iye akadaro, “ngavaburuke neni vamupomere,+ kana paine chimwe chinhu chisina kururama pamusoro pomunhu uyu.” 6 Naizvozvo paakanga apedza mazuva asingapfuuri masere kana kuti gumi ari pakati pavo, akaburukira kuKesariya, uye zuva rakatevera akagara pachigaro chokutonga,+ akarayira kuti Pauro aunzwe. 7 Paakasvika, vaJudha vakanga vaburuka vachibva kuJerusarema vakamira vakamukomberedza, vachimupomera mhosva zhinji uye dzakakura+ dzavasina kukwanisa kupa uchapupu pamusoro padzo. 8 Asi Pauro achizvidzivirira akati: “Handina kumbotadzira+ Mutemo wevaJudha kana temberi+ kana Kesari.” 9 Festo, achida kunzi akanaka+ nevaJudha, akapindura Pauro achiti: “Unoda here kukwira kuJerusarema kunotongwa ikoko pamberi pangu pamusoro pezvinhu izvi?”+ 10 Asi Pauro akati: “Ndakamira pamberi pechigaro chokutonga chaKesari,+ pandinofanira kutongwa. Handina kuitira vaJudha chinhu chakaipa,+ sezvamuri kunyatsoonawo. 11 Asi chokwadi, kana ndiri munhu anoita zvakaipa,+ uye ndakaita chimwe chinhu chakakodzera rufu,+ handikumbiri kuti ndirege kufa; asiwo kana pasina chimwe chezvinhu izvozvo zvandiri kupomerwa nevarume ava, hapana munhu angandigamuchidza kwavari kuti anzi akanaka. Ndinokwidza mhosva yacho kuna Kesari!”+ 12 Pashure pokutaura neungano yevaipa mazano, Festo akabva apindura kuti: “Wakwidza mhosva yacho kuna Kesari; saka uchaenda kuna Kesari.” 13 Zvino mazuva akati kuti paakanga apera, mambo Agripa naBhenisi vakasvika muKesariya kuzoshanya kuti varemekedze Festo. 14 Naizvozvo, zvavakanga vachipedza mazuva anoverengeka vari imomo, Festo akazivisa mambo nyaya dzine chokuita naPauro, achiti: “Pane mumwe murume akasiyiwa ari musungwa naFerikisi, 15 uye pandaiva muJerusarema vapristi vakuru nevarume vakuru vevaJudha vakamumhan’arira,+ vachikumbira kuti atongerwe rufu. 16 Asi ndakavapindura kuti haasiriwo maitiro echiRoma kugamuchidza chero munhu upi zvake kuti unzi wakanaka, munhu wacho anopomerwa asati asangana nevanomupomera+ chiso nechiso uye asati awana mukana wokutaura achizvidzivirira pamusoro pezvaari kupomerwa. 17 Naizvozvo vose pavakasvika pano, handina kunonoka, asi zuva rakatevera ndakagara pachigaro chokutonga, ndikarayira kuti murume wacho aunzwe. 18 Vamira, vanomupomera havana kubudisa mhosva+ yezvinhu zvakaipa zvandakanga ndambofungira pamusoro pake. 19 Vaingovawo zvavo nedzimwe nharo naye pamusoro pokunamata kwavo+ mwari uye pamusoro pomumwe Jesu akanga afa asi uyo Pauro akaramba achiti mupenyu.+ 20 Naizvozvo, ndichivhiringidzika nenharo pamusoro penyaya idzi, ndakamubvunza kana aida kuenda kuJerusarema kunotongwa ikoko pamusoro penyaya idzi.+ 21 Asi Pauro paakakwidza mhosva yacho+ kuti achengetwe nokuda kwezvaizosarudzwa naIye Anoremekedzwa, ndakarayira kuti achengetwe kusvikira ndava kuzomutumira kuna Kesari.” 22 Zvino Agripa akati kuna Festo: “Ini ndingadawo kunzwa murume wacho.”+ “Mangwana,” iye akadaro, “muchamunzwa.” 23 Naizvozvo, pazuva rakatevera, Agripa naBhenisi vakauya vachivhaira+ kwazvo, vakapinda muimba yaitongerwa mhosva vaine vatungamiriri vehondo nevarume vakuru vomuguta, uye Festo paakarayira, Pauro akaunzwa. 24 Festo akati: “Mambo Agripa nemi mose munesu, muri kuona munhu uyu wandakakumbirwa nevanhu vazhinji vose vevaJudha muJerusarema nokunowo, vachishevedzera kuti haachafaniri kurarama.+ 25 Asi ndakanzwisisa kuti hapana chakaipa chaakanga aita chakakodzera rufu.+ Naizvozvo murume uyu paakakwidza mhosva yacho+ kuna Iye Anoremekedzwa, ndakasarudza kumutumira. 26 Asi pamusoro pake handina chinhu chaicho chokuti ndinyore kunaShe wangu. Nokudaro ndamuunza pamberi penyu, uye kunyanya pamberi penyu imi, Mambo Agripa, kuti, kana kuongorora kwokutonga kwaitwa,+ ndiwane chimwe chinhu chokuti ndinyore. 27 Nokuti ndinozviona soupenzi kuti nditumire musungwa ndisingaratidziwo mhosva dzaanopomerwa.”